ဂေါ်ဖီစေ့ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ်မျိုးစေ့စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ
တရုတ် ဟင်းရွက် အစေ့ ဂေါ်ဖီထုပ် f1 မျိုးစပ် အစေ့များ စောစီးစွာ ရင့်ကျက်မှု မြင့်မားပြီး အပင်ပေါက်မှု မြင့်မားသည်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား: ဂေါ်ဖီစေ့ အရောင်: အစိမ်းရောင် မူရင်းနေရာ: Hebei, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXZ No.2 မျိုးစပ်: YES ထုတ်ကုန်အမည်: F1 တရုတ်ဂေါ်ဖီစေ့ ခုခံမှု- ရောဂါခုခံမှု အသီးအလေးချိန်: 1.5kg ခန့် အသီး အရောင် : အစိမ်းရင့်ရင့် နေ့ရက် : 60 ရက် အရသာ : ကောင်းမွန်သော အရသာ ပေါက်နှုန်း : 85% သန့်ရှင်းမှု : 99% သန့်ရှင်းမှု : 95% Packing : 100 g/bag လက်မှတ် : ISO9001 ;ISTA ;CO ;CIQ ထုတ်ကုန် Desc...
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော တရုတ်ဂေါ်ဖီစေ့အစေ့များ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစေ့များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ဂေါ်ဖီထုပ် အစေ့များ အရောင်- အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXD No.1 မျိုးစပ်: YES ရင့်ကျက်နေ့များ: 60 ရက် ဦးခေါင်း အလေးချိန်: 2-4 ကီလိုဂရမ် ဦးခေါင်း အရှည်: 29.3 စင်တီမီတာ ဦးခေါင်း လုံးပတ် 16 cm အရသာ အရသာ ခံနိုင်ရည် : ရောဂါ ခံနိုင်ရည် ထုပ်ပိုးခြင်း : 20 ဂရမ်/အိတ် သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို ထောက်ခံချက် : CIQ;CO;ISTA;ISO9001 ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် အရည်အသွေးကောင်း တရုတ်ဂေါ်ဖီစေ့ အစေ့အဆန်များ...
F1 hybrid အစောပိုင်း ရင့်ကျက်မှု နွားနှလုံး ဂေါ်ဖီစေ့ စိုက်ပျိုးရန်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား: ဂေါ်ဖီစေ့အရောင်: အစိမ်းရောင် မူရင်းနေရာ: တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SX OX နှလုံးဂေါ်ဖီထုပ် မျိုးစေ့များ မျိုးစပ်ခြင်း: YES ခုခံမှု- ရောဂါခုခံမှု အသီးအလေးချိန်: 1 ကီလိုဂရမ်ခန့် အသီး အမြင့်: 18 စင်တီမီတာ အရသာ- အရသာကောင်း ရင့်ကျက်မှု ရက်များ- 55~60 ရက် ထောက်ခံချက်- ISO9001;CO;CIQ;ISTA ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် F1 မျိုးစပ် စိုက်ပျိုးရန် နွားနှလုံးဂေါ်ဖီအစေ့များ 1. အစောပိုင်း ရင့်ကျက်မှု...
အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူ anthocyanin အရောင်အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်အစေ့ရောင်းရန်ပူ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အမျိုးအစား- ဂေါ်ဖီစေ့ အစေ့များ အရောင်- အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင် မူရင်းနေရာ- Hebei၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: ZY မျိုးစပ်: YES အသီး အလေးချိန်: 1.5-2kg ခုခံမှု- ...
ဟင်းရွက်အစေ့ ဂေါ်ဖီထုပ် f1 hybrid SXD No.2
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်များ အမျိုးအစား- ဂေါ်ဖီထုပ် အစေ့အရောင်- အစိမ်း၊ အစိမ်း ပင်ရင်းနေရာ- ဟီဘေး၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXD No.2 မျိုးစပ်: YES ခုခံမှု- ရောဂါရင့်ကျက်မှု...
မြင့်မားသောရောဂါခံနိုင်ရည်ရှိသောအစိမ်းရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်အစေ့ Pakchoi အစေ့များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အသေးစိတ် အမျိုးအစား: ဂေါ်ဖီစေ့အရောင်: အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင် မူရင်းနေရာ: တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SHUANGXING မော်ဒယ်နံပါတ်: SXD No.2 မျိုးစပ်: YES ခုခံမှု- ရောဂါခုခံမှု မြင့်မားသောအသီး အလေးချိန်: 4.2 ကီလိုဂရမ် ကြီးထွားမှုရက်များ: 75-80 ရက် အရသာ အရသာကောင်း ထုပ်ပိုးခြင်း- 200 ဂရမ်/အိတ် ထောက်ခံချက်- ISO9001;ISTA;CO;CIQ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ဂေါ်ဖီစိမ်းအစေ့အဆန် Pakchoi Seeds 1. တိုက်ရိုက်ကြဲပြီး ရက်ပေါင်း 75-80 တွင် ရင့်ကျက်သည်...။